कर कटौतीसम्बन्धी विधेयक सिनेटद्वारा पारित
एजेन्सी न्युयोर्क, ६ पुस | पुष ०६, २०७४
विधेयकलाई तल्लो सदन हाउस अफ रिप्रिजेन्टेटिभले पुनः स्वीकृति जनाउनुपर्छ –
अमेरिकी कंग्रेसले कर प्रणालीमा व्यापक सुधारको योजनालाई स्वीकृति प्रदान गरेको छ । माथिल्लो सदन सिनेटले नयाँ कर प्रणालीलाई स्वीकृति दिएको हो । तीन दशकपछि पहिलोपटक कर कटौती गर्ने नयाँ विधेयक पारित भएको हो । नयाँ विधेयक पारितलाई राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको पहिलो महत्वपूर्ण विधायिकी सफलता मानिएको छ । सिनेटमा लामो बहसपछि ४८ का विरुद्ध ५२ मतले सो विधेयक स्वीकृत भएको हो । सो विधेयकलाई तल्लो सदन हाउस अफ रिप्रिजेन्टेटिभबाट पुनः स्वीकृति पाउनुपर्नेछ । तल्लो सदनबाट स्वीकृतिपछि प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरिनेछ ।
कर कटौती गर्ने सो विधेयकको डेमाक्र्याटले चर्को विरोध गरेको छ । विधेयकले धनी व्यक्तिलाई मात्र फाइदा पुग्ने र राष्ट्रिय ढुकुटी सकिने डेमोक्र्याट समर्थित सांसदहरूले बताएका छन् । तर, नयाँ कर प्रणालीले ठूला व्यापारिक प्रतिष्ठान, साना उद्योग र व्यक्तिहरूको कर कटौती हुने र आर्थिक वृद्धि गर्ने रिपब्लिकनले दाबी गरेका छन् । कर कटौतीले अमेरिकाको राष्ट्रिय ऋणको भार बढ्ने उनीहरूले चेतावनी दिएका छन् । विधेयकलाई माथिल्लो सदनमा प्रस्तुत गरेपछि विधेयकका विरोधीहरूले संसद् भवनबाहिर ‘किल द बिल’ भनेर नाराबाजी गरेका थिए । उनीहरूलाई संसद् परिसरबाट बाहिर निकालिएको थियो । नयाँ व्यवस्थाअनुसार कर्पोरेट हाउसमा लगाउँदै आएको करमा ३५ प्रतिशतबाट २१ प्रतिशतमा झारिनेछ । त्यस्तै, नयाँ प्रावधानअनुसार व्यक्तिगत कर दरमा पनि कटौती हुनेछ ।
‘रिपब्लिकनले ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्छ’
विधेयकलाई लिएर डेमोक्र्याटिक र रिपब्लिक परस्पर दुई कित्तामा विभाजित भएका छन् । संसद्का दुवै सदनमा रिपब्लिनकहरूको बहुमत छ । यसअघि तल्लो सदन हाउस अफ रिप्रिजेन्टेटिभले विधेयक पारित गरेको थियो । तल्लो सदनमा भएको मतदानमा २२७ सांसदले पक्षमा र २०३ ले विपक्षमा मतदान गरेका थिए । यसअघि डेमोक्र्याटिक नेता चंक स्चुमरले विधेयक पारित भएसँगै आगामी मध्यावधि निर्वाचनमा रिपब्लिकनले ठूलो मुल्य चुकाउनुपर्ने चेतावनी दिएका छन् । ‘कर कटौतीसम्बन्धी कानुनकै कारण आगामी निर्वाचनमा रिपब्लिकनले ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्नेछ,’ उनले भने । विधेयक स्वीकृत भएकोमा सभामुख पल रायनले खुसी प्रकट गरेका छन् । उनले भने, ‘आज हामीले यहाँका नागरिकलाई उनीहरूको रकम फिर्ता गरिदिएका छौँ । यो उनीहरूकै रकम हो ।’
कसले जित्यो, कसले हार्‍यो ?
विधेयकले अमेरिकी कर प्रणालीमा गत तीन दशकयताकै सबैभन्दा व्यापक फेरबदल ल्याउने अनुमान गरिएको छ । कर सुधार व्यापारी र विशेषतः बहुराष्ट्रिय कर्पोरेसन र व्यावसायिक उद्योगका लागि सुखद हुन सक्छ । अत्यधिक धनी र आफ्ना बालबालिकालाई निजी बोर्डिङ स्कुलमा पढाउने अभिभावकलाई यस विधेयकले फाइदा गर्नेछ । तर, उच्च कर लाग्ने र महँगो राज्यमा बसोवास गर्ने परिवारका लागि भने घाटा हुनेछ । उनीहरूले स्वास्थ्यसम्बन्धी बिमा अनिवार्य तिर्नुपर्छ । भविष्यमा ठूलो संख्याका करदाताले न्यून कर बिल तिर्नेछन् ।
नयाँ करमा के छ प्रावधान ?
विद्यमान कानुनबमोजिम ठूला व्यापारिक प्रतिष्ठान र कर्पोरेसनहरूले एक करोड डलरभन्दा बढीको करयोग्य आम्दानीमा न्यूनतम १५ प्रतिशतदेखि लिएर बढीमा ३५ प्रतिशतसम्म कर तिर्नुपर्ने प्रावधान छ । तर, नयाँ योजनाअनुसार आगामी सन् २०१८ देखि त्यो दरलाई समग्र २१ प्रतिशतमा झारिएको छ । नयाँ प्रावधानमा व्यक्तिले तिर्ने करको दर पनि अस्थायी रूपमा घटाइएको छ । पैतृक सम्पत्ति हस्तान्तरण तथा विदेशमा कमाएको नाफामा लाग्ने करमा पनि कटौती गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
‘इयरफोन’ले लियो १३ स्कूले बच्चाको ज्यान !
बलात्कार अभियोगमा आशारामलाई जन्मकैद
किम–ट्रम्प वार्ताअघि मुनले ट्रम्पलाई भेट्ने
नाइजेरियाकाे बेन्युमा चर्चमाथि आक्रमण, १६ जनाकाे मृत्यु